စတိုင်လ် | ဇန္နဝါရီလ 2022
Meghan Markle ၏ Go-To Sneakers သည်ယခု ၃၀% လျှော့စျေးရှိသည်
2022 | တင်ပို့ Paul Adams | အမျိုးအစား: စတိုင်လ်
Meghan Markle သည်ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းရာသီက Vejas sneakers ကို ၀ တ်ဆင်ပြီးနောက် Glamour စာရေးဆရာတစ်ယောက်သည်၎င်းတို့ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဒါတွေကိုအခုရောင်းဖို့ဒီမှာပါ။
Wimbledon 2018 တွင်အကောင်းဆုံးကျော်ကြားသူများကိုကြည့်သည်
Emma Watson, Jessica Biel, Justin Timberlake နှင့် Drake တို့သည်ယခုနှစ် Wimbledon ပြိုင်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သောနာမည်ကြီးများထဲမှဖြစ်သည်။
မွေးနေ့အိန်ဂျလီနာဂျိုလီ၏အဆုံးစွန်ဆုံးမွေးနေ့မိန်းကလေးကဲ့သို့ပုံ ၈ ပုံ
တော်တော်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အိန်ဂျလီနာဂျိုလီဟာဒီနေ့မှာအသက် ၃၉ နှစ်ပြည့်ပြီးသူမမွေးနေ့အတွက်မိန်းကလေးအများစုနဲ့တူတဲ့ပုံအချို့ကိုစုဆောင်းပြီးဂုဏ်ပြုနေပါတယ်။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ ကျယ်ပြန့်သောအပြုံးနှင့်အားလုံးပျော်ရွှင်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအရာများသည်သူမ၏တကယ့်ပွဲလမ်းသဘင်များမှမဟုတ်သော်လည်းသူမသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စံနှုန်းများ (ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာများ) နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဂန္တ ၀ င်မွေးနေ့မိန်းကလေး၏ညဝတ်ဂါဝန် (sequins နှင့် sparkly) သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Salt ၏ပွဲ ဦး ထွက်အတွက်ဤ LBD ကိုရွေးချယ်ခဲ့သူ Angelina နှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါသာ b-day မိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့ပြီး mega ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါရှည်လျားတဲ့ရထားနဲ့ပိုကြိုက်တဲ့ပါတီ ၀ တ်စား ၀ တ်စုံကို ၀ တ်စားဆင်ယင်တာကိုကျော်သွားချင်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် Cannes တွင်သူမ ၀ တ်ခဲ့သောဤချောကလက်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ လှေကားပါ ၀ င်သောဒေသတစ်ခုကိုလည်းငါတွေ့ချင်သည်၊ ဒါကြောင့်အဲဒါကိုပြဖို့စံပြအခြေအနေရှိသည်။ သူမသည်ဤလှပသောအနက်ရောင် ၀ တ်စုံနှင့်အတူလှပသောဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲတစ်ခုအတွက်တစ်နေရာရာမှာလျောက်ပတ်နေသည့်စွမ်းအားရှိသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်တူသည်မဟုတ်လော။ ဒါပေမယ့်ငါ Angelina ကို (ငါတကယ်မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်) သူမဟာနှစ်တိုင်းဖန်ဆင်းတဲ့ညစာစားပွဲကိုသူမမိသားစုနဲ့အတူနေ့တစ်နေ့ရွေးမယ်လို့ငါထင်တယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ လွယ်လွယ်ကူကူနှင့်အနက်ရောင်အပိုင်းအစများသည်သူမလက်မှတ်မထိုးရဟုထင်ရသည်
ဇန်န ၀ ါရီလ ၃၁ ရက်၊ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအယ်ဒီတာများပုံစံပြုလုပ်ထားသောမတ်မတ်ဝတ်စုံများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြသနာအတွက်၊ စွဲမက်ဖွယ် ၀ န်ထမ်း ၃၁ ဦး သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းငါးမျိုးနှင့်ရောနှောပေါင်းစပ်ရန်ရှိသည်။ သူတို့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့တဆင့်နှိပ်ပါ။
၁၃ Black Friday လက်ဆွဲအိတ်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ်များသင်မလွတ်နိုင်ပါ Nordstrom, Tory Burch, Rebecca Minkoff
ထိုChloé crossbody အိတ်မှရှားပါးစတိုင်လ် Chanel သို့၊ သင်အားလပ်ရက်စျေး ၀ ယ်ရန်ကူညီမည့် 2019 Black Friday လက်ဆွဲအိတ်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ်များ။
Ugg ၏ရေစိုနှင့်အစွန်းအထင်းခံနိုင်သောသိုးသားဖိနပ်အသစ်အကြောင်းသတင်းအားလုံး Ugg သည်၎င်း၏အကျော်ကြားဆုံး Classic ဖိနပ်အသစ်များကိုစောင်နှင့်ရေဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်သိုးသားစတိုင်အသစ်ဖြင့်သိုးမွှေးထိုးခြင်းကိုရပ်စဲလိုက်သည်။
Ballroom Jeans များ၊ အခန်းများအတွက်သူ့အခန်းများနှင့်အတူဘောင်းဘီများကိုကြည့်ပါ
လူတစ်ယောက်ကစိတ်ကူးယဉ်ဘောလုံးကွင်းတွေအတွက်အများအားဖြင့်စိတ်ကူးယဉ်ဘောလုံးကွင်းတွေအတွက်သီးသန့် gusto အမျိုးအစားနဲ့စားပြီးတဲ့အခါငါနားထောင်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းရဲ့သူငယ်ချင်းကနှစ်သစ်ကူးနေ့နေ့လယ်စာစားတဲ့အခါသူကသူ့ 'Ballroom Jeans' ကိုဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်းပြောတဲ့အခါငါဂျင်းထည် ၀ တ်ဖို့ဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုအံ့ kept နေခဲ့တယ်။ Dututh Trading Co. ၏ Ballroom Jeans၊ မူပိုင်ခွင့်ရှိသော Crouch Gusset ပါ ၀ င်သောလွတ်လပ်မှုအတွက်ခေတ်အဆက်ဆက်ငါတွေ့ဖူးသမျှအလွန်ရယ်စရာကောင်းသောထုတ်ကုန်ကိုဆိုလိုသည်။ လှုပ်ရှားမှု။ ဒီလိုပြောဖို့ရိုးစင်းတဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူး။ ဒီဘောင်းဘီတွေမှာသူ့အမှိုက်တွေအတွက်အပိုနေရာရှိတယ်။ သူတို့ကိုရယ်စရာကောင်းတဲ့ကြော်ငြာတွေကိုကြည့်ပါ၊ ငါဆိုလိုတာက ... မင်းလုပ်နိုင်လား။ ၎င်းသည်ထူးခြားသောအမျိုးသားပြသနာတစ်ခုဟုမှတ်ယူခြင်း၊ ၎င်းတို့သည်ငါထင်သည့်အတိုင်းအဓိပ္ပာယ်မဲ့သည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ၊ သူတို့သည်သူတို့၏ site ပေါ်တွင်ဖောက်သည်ပေါင်း ၁၇၀၀ ကျော်ထံမှ ၄.၅/၅ ကြယ်ပွင့်အဆင့်ရှိသည်။ တစ်ခုခုပေါ်? မင်းယောက်ျားကဒီတစ်စုံကို ၀ တ်ဖူးလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်လား။ အဲဒါကိုနားထောင်ရအောင်။
လွန်ခဲ့သောခြောက်လအတွင်း Madewell's Sightseer စုဆောင်းမှုမှဖိနပ်များ ၀ ယ်လျှင်အရေးကြီးသတင်း - လုံခြုံရေးကိစ္စကြောင့်ကုမ္ပဏီသည်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါတွင်အတွဲ ၅၀,၉၀၀ ကိုပြန်ခေါ်သည်။ WWD ၏အဆိုအရ Sightseer စုဆောင်းမှုမှအမှတ်တံဆိပ်၏ဖိနပ်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနှင့်ဇူလိုင်လကြားတွင် 'သတ္တုပါးပြင်သည်စွန့်ပစ်နိုင်။ ခြေဖ ၀ ါးအောက်ခြေကိုဖောက်နိုင်သဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသည်' ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ US Consumer Product Safety Commission သို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိကြောင်းသိရသည်။ ခြေညှပ်ဖိနပ်ကို Madewell စတိုးဆိုင်များ၊ Madewell.com အွန်လိုင်း၊ သို့မဟုတ် shopbop.com အွန်လိုင်း၌ဒေါ်လာ ၆၀ မှဒေါ်လာ ၈၀ အထိရောင်းချခဲ့သည်။ တိကျသောစတိုင်များပါဝင်သည်: C0275 Sightseer Knotted Slide Sandals C0276 Sightseer T-Strap Thong ခြေနင်းကိုအနက်ရောင်သားရေ C0277 Sightseer T-Strap Thong Sandals Metallic Color-Block C0278 Sightseer Buckle Gladiator Sandals C0279 Sightseer Slide Sandals C1105 Sightseer8 -Loop Sandals C5895 Sightseer Ankle-Wrap Sandals in Shiny Silver C5897 Sightseer Lace-Up Sandals C6090 Sightseer Ankle-Wrap Sandals in Metallic Sand ၌သင်စတိုင်များပိုင်ဆိုင်ပါက၎င်းတို့အားချက်ချင်းမဝတ်ပါနှင့် 866-544-1937 သို့ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ 24/7@madewell.com သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်း ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက် www.madewell.com သို့သွားပြီး 'အရေးကြီးသတိပေးချက်' ကိုနှိပ်ပါ။
ယခုဝယ်ရန်အကောင်းဆုံး Plus-Size Cocktail Dress များ
သင်သည်ပျော်ရွှင်သောအလေ့အကျင့်ရှိသော LBD ၀ တ်သူဖြစ်စေ၊ နောက်အကောင်းဆုံးအရာကိုစိတ်ဝင်စားသောသူဖြစ်စေ၊ သင်၏နောက်ထပ်အရွယ်အစားကြီးကော့တေးအ ၀ ယ်အတွက်စျေး ၀ ယ်ရမည့်နေရာကဒီမှာပါ။
One Big Party တွင်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ၀ တ်စုံဆင်ယင်ထားသောဘုရင်အချို့ကိုကြည့်ပါ
တော်ဝင်စတိုင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတိုင်းကိုအမြဲတစေအောင်ပွဲခံတဲ့အမျိုးသမီးလက်တစ်ဆုပ်စာရှိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် Kate Middleton သာမက Queens Letizia နှင့် Maxima နှင့် Princess Mary တို့ပါ။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး စီသည်သူမ၏ဇာတိနိုင်ငံတွင်အဓိကစတိုင်အင်အားတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးမှာဆွဲဆောင်မှုရှိရှိကြည့်ရှုနေသောသူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မျက်မြင်ရခဲသည်။ ဒိန်းမတ်ဘုရင်မကြီး Margrethe II အတွက် ၇၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် (ဒါပေမယ့်အလေးအနက်ထားတာက tiaras တွေပါ) ။ သြစတေးလျဖွားမင်းသမီး Mary သည်သူမယောက္ခမ၏မွေးနေ့အားပခုံးပေါ်မှသကြားပါသောပန်းရောင်ဂါဝန်ဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည်။ သူမရဲ့ bling အားလုံးရင်းနှီးပုံရတယ်၊ အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်၊ သူမကသူမရဲ့တရားဝင်ဓာတ်ပုံထဲမှာအဲဒီအစိတ်အပိုင်းကို ၀ တ်ခဲ့တယ်။ စပိန်ဘုရင်မ Letizia သည်ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကနန်းတက်ပွဲအပြီးကတည်းက ပို၍ စတိုင်ကျစွာအဆက်မပြတ်လှပခဲ့သည်။ ဒီပွဲအတွက်သူမဟာအဖြူအမည်းဝတ်ရုံ ၀ တ်ထားတဲ့အခင်းအကျင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ သူမ၏အရသာကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများသောဘုရင်မ Maxima သည်အနက်ရောင်ဂါဝန်နှင့်စိန်များစွာတို့ကြောင့်စိတ်ပျက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ဒိန်းမတ်မင်းသမီး Marie သည်ဂန္ထဝင်တော်ဝင်စတိုင်ကို ၀ တ်ထားသောလက်ကောက်ဝတ်ပါ ၀ င်သည့်ရေတပ်ဇာကို ၀ တ်ခဲ့သည်။ ဝတ်ကောင်းစားလှတော်ဝင်ဘယ်စတိုင်လ်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ။
ဒီအားလပ်ရက်မှာစျေး ၀ ယ်ဖို့အလှအပကနေအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေအထိအိမ်သုံးအသုံးအဆောင်တွေ၊ စတော့အိတ်တွေ ၀ ယ်တာကိုရွေးချယ်ပါ။
တစ်ပိုင်းမှသည်ရေကူးဝတ်စုံအထိ၊ ကောင်းမွန်စွာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမယ့်ဖက်ရှင်ကျကျရေကူးဝတ်စုံအစင်း ၅၀ ကိုတွေ့ရှိပြီးကမ်းခြေမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေလိမ့်မယ်။
တစ် ဦး က Rant လျင်: ငါတို့ကော်ဇောနီပေါ်မှာအနက်ရောင် Pumps ကိုကျေးဇူးပြုနိုင်သလား
ဖြစ်ရပ်မှန်၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လှပတဲ့ဖိနပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ အဖြစ်မှန်-မင်းက A-list celebrity တစ်ယောက်ဆိုရင်မင်းဝတ်ချင်တဲ့တစ်စုံကိုရွေးစရာအများကြီးဘဲ။ အဖြစ်မှန်: Waaaaay သူတို့ကော်ဇောနီကိုထိတဲ့အခါပျင်းစရာကောင်းတဲ့အနက်ရောင်စုပ်စက်တွေကိုသုံးနေကြတယ်။
၂၀၁၄ မှာကြိုးစားရမယ့် Trend ၁၀ ခု
ဤအံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိချက် ၂၀ နှင့်သင်၏ Fall Wardrobe ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ
ဂရမ်မီ After-Party အားလုံးသည်အရေးပါသည်၊ Kardashians, Rita Ora နှင့် Miranda Kerr တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည်။
ကော်ပီအနီရောင်ကော်ဇောဓာတ်ပုံ opp မှာကြည့်ကောင်းရုံတင်မကဘူး၊ ပါတီပွဲတွေမှာ ၀ တ်စုံတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိလို့လား။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Grammys အကောင်းဆုံး ၀ တ်စုံစာရင်းတွေအများကြီးကအနားယူဖို့အိမ်ပြန်သွားပုံရတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီအမျိုးသမီးတွေတစ်ပုံတစ်ပင်ကိုငါအပြင်မှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ယင်းအစားညဉ့်နက်သန်းခေါင်ယံတွင်အကောင်းဆုံးသောမျက်နှာအချို့ရှိသည်။ အစ်မ Kim Kardashian သည်အဓိကပွဲမှကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဝတ်စုံများကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော်လည်းအစ်မများဖြစ်သော Kendall နှင့် Kylie Jenner နှင့် Khloe Kardashian တို့ကနောက်ပိုင်းတွင်ထိုအရာကိုအလေးအနက်ထားခဲ့သည်။ မိန်းကလေးသုံး ဦး စလုံးသည်ပုံမှန် Kardashian M.O. ကိုလှုနေကြသည်။ နက်ရှိုင်းသော plunges များနှင့်မြင့်မားသောအပေါက်များနှင့်အတူရှည်လျားလျှောကျသည်။ သတိပြုရကျိုးနပ်သည်မှာ Kylie သည်သူမ၏မကြာသေးမီက Kim အယောင်ဆောင်မှုများကိုညနေခင်း၌ထားခဲ့ပုံရသည်။ ဒီစတီဗင်ခါလီအ ၀ တ်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကသူမထိတ်လန့်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ပိုတူတယ်။ Rita Ora သည်သူမ၏အလွန်တောက်ပသောငွေရောင်ဂါဝန်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးငါမင်းကိုပြောရမယ့်အချက်ကတော့ငါဒီတောက်ပတဲ့ပုံနှိပ်ပိုး Dsquared2 mini ကိုပိုကြိုက်တယ်။ အသံအတိုးအကျယ်ကသိသာထင်ရှားတဲ့ပုံသဏ္ဌန်ကိုဖြစ်စေတယ်၊ ​​မင်းအချိုရည်တွေနည်းနည်းပြန်ပစ်လိုက်၊ ကခုန်လိုက်ရင်တော့ငါကဘယ်အလုပ်ကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာငါတို့သိမယ်ထင်တယ်။
Glamour Web Intern, Lane Florsheim ကငါတို့ရဲ့နွေရာသီဝတ်စုံပို့စ်မှာဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလိုက်သလဲ။
Teen Vogue's Young Hollywood Party တွင်အကောင်းဆုံး ၀ တ်စုံ - ယခုမဲပေးပါ။
ဟောလိဝုဒ်၏တက်သစ်စမင်းသမီးများသည်မနေ့ညက Teen Vogue ၏နှစ်ပတ်လည်ပါတီပွဲအတွက် (အသက်အရွယ်နှင့်လျော်ညီသောနည်းလမ်းဖြင့်) ထွက်သွားသည်။
သင်ဟာဂန္ထဝင် Aquarius တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ Closet သဲလွန်စ ၉ ခု
Aquarius စွဲမက်ဖွယ်မိန်းကလေးများအားလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ ဆင်တူယိုးမှားဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နတ်မိမယ်ရာသီခွင်အချို့ရှိတယ်ဆိုတာငါယုံကြည်တာကြောင့်မင်းရဲ့ဗီဒိုဒါမှမဟုတ်အဝတ်အစားတွေထဲမှာမင်းထည့်ထားခဲ့တဲ့အရာတွေကိုစစ်ဆေးရမယ့်စာရင်းတစ်ခုငါစုစည်းလိုက်တယ်။ အချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေခဲ့သောအံ့သြဖွယ်ဆောင်းပါးအမျိုးအစားပေါင်းများစွာကိုတင်ထားသောနက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင် Susan Miller ၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည် (ထို့အပြင်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ရာ horoscope ဗွီဒီယိုများနောက်ကွယ်မှဆွဲဆောင်မှုရှိသူဖြစ်သည်၊ သင်မရှိသေးလျှင်သူတို့ကိုကြည့်ပါ။ ) မင်း Aquarius မဟုတ်ရင်ဒီမှာငါရေးခဲ့ဖူးတဲ့အခြားလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပါ။ မင်းဗီရိုထဲမှာမင်း Aquarius ရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ၁ ။ တောက်ပတဲ့အပြာရောင်ဒါမှမဟုတ်ပန်းရောင်ခရမ်းရောင်ခရမ်းရောင်တွေရှိတယ်။ Miss Miller တစ် ဦး အရမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအရောင်တွေက cobalt နဲ့ fuchsia တွေဖြစ်ပြီးအခုမင်းကြိုက်တဲ့အပိုင်းအစအနည်းငယ်ကိုမင်းစုဆောင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ ၂။ ဖော်ပြချက်လက်ဝတ်ရတနာများသည်ရိုးရှင်းပြီးပိုများသောအပိုင်းများ “ Aquarius အမျိုးသမီးတစ် ဦး မှာထူးခြားမှုတစ်ခုရှိတယ်၊ သူကအသစ်အဆန်းတွေ၊ ပူပူနွေးနွေးတွေရဲ့အစွန်းမှာအမြဲနည်းနည်းကွဲပြားတယ်” လို့ Susan ကရေးခဲ့တယ်၊ ဒီခံစားချက်ကလက်ဝတ်ရတနာတွေရဲ့အရသာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ မင်းကပါးလွှာတဲ့ရွှေဆွဲကြိုးဒါမှမဟုတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့လက်ကောက်ပါတဲ့ကောင်မလေးမဟုတ်ဘူး။ ထိုထက်ပိုသေးငယ်သောလည်ဆွဲများနှင့်သတိထားမိသောလက်စွပ်များနှင့်ကော့တေးလက်စွပ်များသည်သင်၏အသုံးအဆောင်ပုံးအတွင်းနေရာလွတ်နေရာယူထားသည်။ ၃။ တစ်ခုခုသည်နည်းပညာဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
Halloween အတွက် kitty ကြောင်မိတ်ကပ်
g spot vibrator ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ